Coronavirus inoenderera nekugadzira kutya, kukanzura uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Nekuda kwekutya kukuru kwakagadzirwa neCoronavirus Kubva pakukwanisa kupararira uye kubuda mukutonga, iyo WHO, hurumende pasi rese, pamwe nemakambani emarudzi akawanda ave yakatora matanho akasimba ekugona kuchengetedza kutonga yehutachiona kusvika padiki kubva kwemavhiki akati wandei misangano, zvirambidzo zvekufamba, pakati pezvimwe zviito zvakamiswa.
Padivi rehunyanzvi, coronavirus yacho yakatokonzera kukanzurwa kwemisangano mipfumbamwe Tech inosimbisa inosanganisira Google I / O, Facebook's F8 chiitiko, Mobile World Congress, uye ikozvino SXSW.
Zvese izvi zvatopfuura bhiriyoni emadhora mukurasika, sekufungidzira nekambani yehungwaru yedata PredictHQ. Iyi nhamba inongovhara kurasikirwa kwakatambura nendege, mahotera, maresitorendi uye vanopa zvekufambisa izvo zvinowanzoita mari kubva mukutenga kwevatori vechikamu, haina kana kusanganisira matikiti kubva kumakambani anobatanidzwa.
Anenge madhora mazana mana nemakumi masere (kurasikirwa kukuru) kuri kukodzera kubviswa kweMobile World Congress, iyo yaizogamuchira vatambi vanopfuura zviuru zana muBarcelona mwedzi wapfuura.
SXSW inotevera, tekinoroji, mumhanzi uye musangano wemufirimu muAustin wakakwevera vamwe 280,000 vatori vechikamu gore rapfuura uye avo vachangobva kuzivisa kudzima kunogona kukonzera kurasikirwa kwakananga kwe $ 350 miriyoni.
Uye isu tinogona zvakare kutaura iyo Game Vagadziri Musangano iyo yanga ichikura gore rimwe nerimwe uye mune vanhu vangangosvika zviuru makumi matatu vaitarisirwa.
Kunyange zviitiko zvakati wandei, zvinosanganisira Facebook F8 neAdobe Summit, zvichiri kuitirwa pamhepo, kuedza uku hakutadzise kurasikirwa kwakakura kwemari kubva mukudzimwa kwechiitiko chemuviri.
Uku kukanzurwa kunoitika kana vanhu vanopfuura zviuru mazana matatu nemazana mana vafa uye vanopfuura zviuru zana vaonekwa vaine coronavirus.
Makambani mazhinji e tech, kusanganisira Twitter uye Square, vakapa vashandi vavo kuti vashande kubva kumba. Mamwe makambani akati wandei, akadai seAmazon, akanzura mafambiro asiri-akakosha, kusanganisira epasi rese.
Mareferenzi ekushanda kubva kumba akakwirawo muzvinyorwa kubva kumakambani ehurumende mwedzi wapfuura. Kana mamwe makambani akateedzera kutungamira kwemakambani makuru ehunyanzvi, izvi zvinogona kuisa hwaro kana kuti zvingangove muyedzo wekugona kwevanhu kushanda pamba mumapoka kwete pane muhofisi.
Mhedzisiro yechirwere inonzwikawo mukugadzira muindasitiri yehunyanzvi. Supply keteni analytics Provider TrendForce yakaburitsa gwaro rinokanganisa zviyero zvaro muzvinhu zvakasiyana pamwe nezvikwata zvezvigadzirwa kupa muongororwo weindasitiri iyi.
Heano mamwe acho:
Kugadzira nharembozha kunotarisirwa kudzikira 12% gore-pamusoro-gore chikamu ichi, kuva kota yepasi pasi mumakore mashanu.
Iyo yekutengesa cheni inoshanda zvakanyanya uye nekudaro inokanganiswa zvakanyanya nekumbomiswa kwekutangazve kwebasa, uye pachavewo nekushomeka kwezvinhu zviri pasi-kumusoro, senge kamera module.
Vakasiyana fiber fiber optic vanopa Iwo ari muWuhan uye pamwe chete account ye25% yekugadzirwa kwenyika. Kuendeswa kwe 5G muChina inogona kukanganiswa nekuda kwekuwedzera kwekuda kwe fiber optic tambo mune anotevera chizvarwa base station.
Iyo DRAM neNAND flash memory misika haigone kukanganiswa nekuda kwekuchengetwa kwezvinhu uye nhanho yepamusoro yeotomeshini mumafekitori e semiconductor anoshandiswa nemakambani akadai seSamsung uye SK Hynix.
Kugadzirwa kwemavhidhiyo emitambo kunyaradzwa kwakakanganiswa zvakanyanya, Asi chinotevera-gen chigadzirwa hachifanirirwe kukanganiswa chero bedzi denda rinogona kurerutswa nekupera kwekota ino, sezvo iyo PS5 neXbox Series X zvichizobatika kuburitswa munguva yezororo.
Yazvino kudiwa kwePS4 uye Xbox One yatoderera nekuda kwekutanga-kutengesa kweiyo nyowani nyowani, zvinoreva kuti panogona kuve nekushomeka kwekunyaradza izvo zvaifungidzirwa kudiwa kwaizogadzirwa mushure
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Coronavirus inoenderera nekugadzira kutya, kukanzura uye nezvimwe